Cholera outbreak in Zimbabwe's capital escalates; 21 dead - Herald-Whig -
A child receives treatment for cholera, at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A parent sits with a child suffering from cholera symptoms at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A father and son lie on a bed while recieving treatment from cholera at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Health workers offer food to a father and son suffering from cholera symptoms at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Patients suffering from cholera symptoms wait, at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Health workers attend to patients suffering from cholera symptoms at a local hospital in Harare, Tuesday, Sept, 11, 2018. A cholera emergency has been declared in Zimbabwe's capital after 20 people have died, the health minister said Tuesday. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Posted: Sep. 12, 2018 7:00 am Updated: Sep. 12, 2018 9:40 am